Inty sy Nday: Miteniteny foana hatramin’ny governemanta !
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Inty sy Nday: Miteniteny foana hatramin’ny governemanta !
Mba mahavariana ihany ny fomba fihevitra ny fitondram-panjakana rehefa miatrika olana iray. Te hiseho eo anoloan’ny vahoaka izay tetehiny hopempoina isanandro ry zareo mpitondra fa « tsy taitra amin’ireo hetsi-pitakiana sy fitokonana mitranga etsy sy eroa tarihin’ny sendika isan-tokony », nefa mipararetra toy ny rano an-dravina isaka ny miposaka ny masoandro. Nahoana izahay no milaza izany ? Satria tsapan-dry zareo mpitondra ny tsy fahombiazany sy ny tsy fahaizany mampivaingana ny vokatra ny fitantanana ataony, raha tena manao ry zareo.
Ny harivan’ny talata teo, andro voalohany nanombohan’ny fitokonan’ny mpitsara, ohatra, dia namoaka fanambarana ny governemanta ka ny minisitra ny Serasera, Harry Laurent Rahajason no manao sonia azy. Ambaran’ilay fanambarana fa « maro amin’ireo mpitsara no tsy manaraka ny fitokonan’ny Sendika Smm fa manohy ny asany andavanandro, ary misaotra sy mankasitraka azy ireny dia mankahery azy ireny ny fitondram-panjakana ».
Te hiteny ny governemanta hoe « tsy mitombina sy tsy maharesy lahatra ny mpitsara marobe ny fototry ny fitakiana ka anaovan’ny Smm fitokonana. »
Ao anatin’io fanambarana io ihany anefa ny governemanta no milaza fa « vonona hiroso amin’ny fifampidinihana ny governemanta mba hitadiavana ny vahaolana ».
Dia mba lojika ve izany, hoy ianao ? Ny ampitso moa ny Smm dia nanamafy fa mananika ny 98%-n’ny mpitsara manerana ny Nosy no mitokona ary mikatso amin’ny ankapobeny ny raharaham-pitsarana.
Raha ny lojika mantsy dia na ny mpitondra fanjakana resy lahatra fa vitsy ny manara-dia ny fitokonana, dia tsy misy antony tokony hahataitra, ary tsy tokony handalo ao amin’ny fisainana akory ny fanehoana fahavononana hifampidinika. Matoa mantsy milaza fa « vonona hidinika » dia noho ny fahatsapana fa manana ny lanjany ilay fitakiana miteraka fitokonana fa raha maivana izany fitakiana izany, dia ho rera-poana eo, ho tratry ny lazon’ady eo ny mpitokona.
Raha ny tena marina izany dia matahotra ny hivadihan’ny rasa ny fitondram-panjakana ka na te hirehareha ho matanjaka satria mitana ny fahefam-panjakana aza dia manahy ny ho very remby. Mampahatsiahy an’ilay fitenenana iray izay hoe « keliray nahazo mpangalatra, ka mirehaka ery hoe azoko ilay mpangalatra ry zalahy, nefa miantso vonjy hoe vonjeo aho fa lasany e ! »
Ny marina dia fantatry ny governemanta fa mikatso ny raharaham-pitsarana satria nanaraka ny fitokonana ny maro amin’ny mpitsara, saingy te hiseho ho zinona ny fitondrana dia mamahan-dalitra vahoaka hoe « vitsy ihany ireo ».
Fomba fihetsika pôlitikan’ny fitondrana notoherin’ny vahoaka teto ange izany e ! Mody manamaivana ny hetsi-bahoaka nefa mipararetra ihany satria mahatsapa ny lanjan’ilay herim-bahoaka.